कर्मचारीले नै टरेनन् प्रधानमन्त्रीलाई - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
कर्मचारीले नै टरेनन् प्रधानमन्त्रीलाई
Published On : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०८:२०
३ वैशाख– विदेश भ्रमण नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन लत्याउँदै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिकहरू विदेश भ्रमण गइरहेका छन्।
वैद्यनाथ महतो एक साताका लागि भन्दै बुधबार मोरक्कोतिर उडेका छन्। उनले टेकबहादुर गुरुङलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनले गुरूङलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको पत्रमा आफू काम विशेषले काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भएको लेखेका छन्। तर पत्रमा भ्रमण कार्यालय प्रयोजनका लागि हो या व्यक्तितगत प्रयोजनका लागि हो भन्ने खुलाइएको छैन। तर स्रोतका अनुसार उनी कार्यालय प्रयोजनका लागि मोरक्को गएका हुन्।